Arsenal Oo Fursad U Heshay Inay Lasoo Saxiixato Weeraryahan Tayo Leh Oo Reer Belgium Ah
HomeSuuqa kala iibsigaArsenal oo fursad u heshay inay lasoo saxiixato weeraryahan tayo leh oo reer Belgium ah
November 27, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Jeremy Doku labo sano ka hor ayuu ku biiri lahaa Liverpool, Arsenal ama Chelsea, sida oo sheegay aabbaha ciyaartoydu.
Weeraryahanka reer Belguim ayaa noqday mid ka mid ah rajada ugu weyn ee wadankiisa ka dib markii uu u ciyaaray kooxda Anderlecht isagoo jira 16 sano jir.
Waxaa jiray warar sheegaayay in Liverpool oo yahay bartilmaamkeeda koowaad ee suuqa kala iibsiga ah iyadoo Jurgen Klopp lagu soo waramayo inuu u arkay inuu yahay bedelka mustaqbalka fog ee Sadio Mane.
Si kastaba ha noqotee, Doku wuxuu ugu dambeyntii u wareegay Ligue 1. Waxa uu saxiixay heshiis shan sano ah ka dib markii naadiyada ay ku heshiiyeen heshiis ku kacaya € 26m.
Waxay la macno ahayd inaysan jiri doonin koox kale oo xiiso weyn xidiga markii laga reebo kooxda Arsena, wakiilka ciyaartoyga iyo aabaha ayaa haatan xaqiijiyay in kooxaha Ingariiska ay xiiseynayeen saxiixiisa laacibka.